Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, besincedisa umthengi ukuba enze imfuduko enzima ngeWordPress. Umthengi uneemveliso ezimbini, zombini eziye zathandwa kangangokuba kuye kwafuneka ukuba bahlule amashishini, uphawu, kunye nomxholo ukwahlula imimandla. Ngumsebenzi omkhulu lowo!
Indawo yabo yokuhlala ihlala ihleli, kodwa indawo entsha iya kuba nayo yonke imixholo ngokubhekisele kuloo mveliso… ukusuka kwimifanekiso, izithuba, izifundo, ukhuphelo, iifom, isiseko solwazi, njl. Njl. Senze uphicotho-zincwadi sayikhasa isiza ukuqinisekisa ukuba asizukufuna Ungaphoswa yinto enye.
Kuba ubhale ukungqinelana ngqo, loo URL ayizukukhokelela kwenye indawo! Ke, unokulingwa ukuba uyenze intetho eqhelekileyo kwaye ungeze ikhadi lasendle kwi-URL:
Oko kuyakuqinisekisa ukuba kuphela kwinqanaba lesiseko leefolda eliya kuthumela ngokufanelekileyo. Ngoku kwingxaki yesibini… uza kuyifumana njani into yokubuza imibuzo efakwe kule ndawo intsha ukuba ukubhekisa kwakhona kungayibandakanyi? Ewe, amabinzana aqhelekileyo anesisombululo esihle saloo nto: